बलात्कार पछि हत्या गरिएका हाम्रा चेलीहरु लाई न्याय दिलाउनु सक्छौं?कोहि छ त्यस्तो दम भएको ? - PT Online News
टिक बहादुर थकाली मुस्ताङमा मृत फेला
साग टिपेको विवादमा पञ्चायतीले जरिवाना तोक्दा महिलाले गरिन् आत्महत्या
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृह जिल्ला झापा जाँदै
उदयपुर र रुकुम पश्चिमको छुट्टाछुट्टै स्थानमा पुरुष मृत अवस्थामा फेला
अस्तव्यस्त कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
बलात्कार पछि हत्या गरिएका हाम्रा चेलीहरु लाई न्याय दिलाउनु सक्छौं?कोहि छ त्यस्तो दम भएको ?
२४ माघ, २०७७ २१:५९
महिला रास्ट्रपति भएको देश भनेर गर्व गर्नु भन्दा शरम मान्नु पर्छ हामीले, जहाँ दिनहु जस्तो हाम्रा छोरी चेली बलात्कार पछि हत्या भैरहेका छन । यस्को बारे नत रास्ट्रपति नै चुइक्क बोल्न सक्नु भयो , नत कुनै नेता मन्त्री बोल्नु जरुरी ठान्दछन। यो कुनै ठूलो बिषय हो जस्तो नै मान्दैनन् । जनताका दुख पिडाले यिनिहरुलाई फरक नै पार्दैन त्यसैले त बेखबर जस्तो बनिरहेका छन् ।
यिनीहरुलाई त सत्ता र कुर्सीको बडो चट्टारो छ। यिनको मुल बिषय मुख्य बिषय नै यहि छ, अनि सभा सम्मेलन गरेर भाषण चाहिँ गर्छन् -हामी जनताका पक्षमा छौं जनता नै हाम्रा भगावन हुन् हामी सुशासन र न्यायको पक्षमा छौं। अनि भेडा जनता ताली पिड्छन खोइ बुझेको जनताका पक्षमा के गरेका छन? खोइ कस्ले पाएको छ न्याय ? यहि हो सुशासन भनेको? जस्ले नियम कानुन लाई आफै मान्दैन त्यस्ताले जनतालाई न्याय देला? नत आज सम्म देकोनै छ।
पहुँच र पैसामा खरिदबिक्री हुन सक्ने नियम कानुन न्याय गरिब सोझा जनताका लागि कागलाई बेल पाके जस्तै हो! ठुला ठुला भाषण गर्ने नेता मन्त्री ज्युहरु तपाई कसैमा दम छ ? यदि छ भने एउटा मात्र बिषयमा न्याय दिलाएर जनताको मन जितेर जनतालाई बिश्वास भरोसा दिलाउ जुन बिषय छ, बलात्कार पछि हत्या गरिएका हाम्रा चेलीहरु लाई न्याय दिलाउ नु , सक्छौं कोहि छ त्यस्तो दम भएको ?
कबिता थापा क्षेत्री (हाल साइप्रस)
भारतले मिचेकाे नेपालको भूमि चाँडै फिर्ता ल्याउँछाैैं, प्रधानमन्त्री
भागरथीको नियति पनि मेरी छोरीको जस्तो नहोस: निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी...
वरिष्ठ समाजसेवी तथा लेखिका ज्वाला संग्रौलाद्वारा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई खुल्ला-पत्र
प्रविन बाँस्तोला हत्या प्रकरण घरधनी रमेश गिरी पक्राउ
आज सोमबारको राशिफल यस प्रकार रहेको छ
खाडी देश जान भन्दै हिँडेका २६ महिलाहरु श्रीलंकाका विभिन्न जेलमा
कुवेतमा ९६२ नयाँ संक्रमित हुँदा १,०१२ जना निको भए